पानीबाट दी’यो ब’ल्ने गडियाघाट मा’ताको अ’चम्मको मन्दिर ! – Life Nepali
पानीबाट दी’यो ब’ल्ने गडियाघाट मा’ताको अ’चम्मको मन्दिर !
एजेन्सी । संसारका केहि ठाउँमा अचम्मका घटनाहरु घटिरहन्छन् । भगवानलाई कसैले मान्छ’न् त कसैले मा’न्दैनन पनि । भगवानलाई जुन ठाउँका मा’निसहरुले मान्दैनन् त्यहि ठाउँमा भगवानको च’मत्कारलाई धेरै विश्वास गरिन्छ । मानिसहरु प्रत्येक दिन मन्दिर जा’न्छन्, पूजा गर्छन र दीयो बाल्छन् । तर के तपाईलाई थाहा छ ? भारतको एउटा मन्दिरमा दियो तेल, घिउबाट होइन पानीबाट बालिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स’ञ्चारमाध्यामका अ’नुसार यो म’न्दिर भारतको मध्य प्रदेश अन्तर्गत शा’जापूर जिल्लाको गडिया गा’उँमा ग’डियाघाट मा’ताको म’न्दिर छ । यो म’न्दिर का’लीसिन्ध नदीको कि’नारमा छ । स’ञ्चारमाध्यामका अ’नुसार गत ५ वर्ष यता यो मन्दिरमा घिउ, तेलबाट नभएर पानीबाट दीयो बाल्दै आइएको छ । पुजारी सि’द्धु सिंहका अ’नुसार यो म’न्दिरमा तेल, घिउ, डिजेल जस्ता बिभिन्न प्रकारका इ’न्धन दियो बा’ल्नको लागि चा’हिदैन । यहाँ मात्र पानीले दी’यो बल्छ ।
उनका अ’नुसार माताले स’पनामा आएर पानीले दि’यो बाल्ने आ’ग्रह गरेपछि पु’जारी सिंहले दी’योमा पानी हालेको र नभन्दै दीयो पा’नीबाट बलेपछि अ’चम्ममा परेका थिए । पुजारी यो च’मत्कार देखेर ड’राएका पनि थिए । उनले यो बारेमा २ महिनासम्म कसैलाई ब’ताएनन् । तर केहि स’मयपछि गा’उँलेलाई ब’ताउँदा गाउँलेले नै उ’क्त कुराको वि’श्वास गरेनन् । जब पूजारीले दी’योमा पा’नी हा’लेर दियो बाले तब गाउँलेको हो’स उ’ड्यो । यो मन्दिरमा का’लीसिन्ध नदी’बाट पानी ल्या’एर दियोमा हा’लीन्छ । दि’योमा पानी हा’ल्ने बित्तिकै पानी चि’ल्लो पदार्थमा परिणत हुन्छ । यो मन्दिरमा व’र्षाको समयमा भने दियो बा’लिँदैन । किनकी नदीमा अ’त्याधिक बाढी आउने हुँदा नदीले म’न्दिर छोप्छ ।
Previous नयाँ बर्समा तपाइको भाग्य राशी कस्तो छ ? हेर्नुस् राशीफल
Next जति नै आ’र्कषक भए पनि क’हिल्यै घरमा न’ल्याउनुस् यी ३ तस्बिर